‘नयाँ शक्तिले पहिला आफूलाई नयाँ बनाउनुपर्छ’ | नयाँ शक्ति नेपाल
‘नयाँ शक्तिले पहिला आफूलाई नयाँ बनाउनुपर्छ’
- २९ साउन २०७५
हेडक्वार्टर सदस्य, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नयाँ शक्ति पार्टीको हेडक्वार्टर सदस्य हिसिला यमी केही दिन अघि मात्रै युरोप भ्रमणबाट फर्कनुभएको छ । युरोपको विकास र अरु विविध पक्षहरुको अध्ययन गरेर फर्किनुभएकी नेतृ यमीसँग विविध विषयमा गरिएको संवादको सम्पादित अंश:
भर्खरै युरोप भ्रमणबाट फर्कनुभएको छ, कस्तो अनुभव रह्यो ?
पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग साउन ६ गते देखि २३ गतेसम्म युरोप भ्रमणमा गएको थिएँ । भ्रमणको क्रममा रसिया, स्विडेन, लक्जम्बर्ग, स्विटजरलेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी र इटली गएका थियौँ ।
समुद्रको कारण युरोप विकसित भएको पाएँ । अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा प्रत्येक देश एक अर्काप्रति ‘इन्टरडिपेन्डेन्ट’ भइसक्यो । तसर्थ चीन र भारतलाई पनि नेपालसँग ‘इन्टरडिपेन्डेन्ट’ किन नबनाइदिने ? चीन–नेपाल–भारत एकअर्कामा अन्तरनिर्भर भए भने हाम्रो विकाससँगै धेरै अन्तरदेशीय समस्याहरु हल हुन्छन् ।
हामीले नेपाललाई दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देश जोड्ने पुल किन नबनाउने ? लक्जम्वर्गजस्तो देश विकासमा धेरै अगाडि बढिसक्यो तर हामी किन विकसित हुन नसकेको ? हामी किन स्मार्ट हुन नसकेको ? जबकि लक्जम्बर्ग नेपालको कुनै जिल्ला भन्दा ठूलो छैन ।
एनआरएनहरुले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानी गर्न लाग्दा उनीहरुलाई अनेकौं प्रश्नहरु गरेर, लगानीको वातावरण बन्न नदिएर हाम्रो हित हुँदैन । एनआरएनलाई लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । एनआरएनले अरु विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने सम्भावना छ । तर त्यो भन्दा पहिले एनआरएनको लगानी नेपालभित्र सुरक्षित हुनुपर्‍यो ।
युरोप र नेपालबीच धेरै फरक रहेको र म घुमेका ती देशबाट नेपालले धेरै शिक्षा लिनुपर्ने मैले देखेँ ।
कसको निमन्त्रणामा युरोप भ्रमणका लागि जानुभयो ?
एनआरएनका साथीहरुले बोलाएर म त्यहाँ गएकी थिएँ ।
एनआरएनले विदेशमा कस्तो प्रगति गरेको भेट्नु भयो ?
भारतका विभिन्न रेष्टुरेण्टमा काम गर्दै गरेका नेपालीहरु आज यूरोपमा आफ्नै रेष्टुरेण्ट खोलेको देखेँ । एनआरएनका साथीहरुले आज स्विट्जरलेण्डमा होटल चलाउन थालिसके । उनीहरुले विदेशमा नै धेरै ठूला लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् र सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । नेपालबाट विदेश गएका नागरिकले आफ्नो सीप र ज्ञानलाई सदुपयोग गरेका छन् । विश्वका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
नेपाली नागरिकले स्वदेशमा नै प्रगति गर्न किन नसकेको होला ?
नेपाली नागरिक विदेशमा गएर त्यत्रो प्रगति गर्दा नेपालमा नै किन प्रगति गर्न सकेन भन्ने प्रश्न त आउँछ । नेपालमा न राजनैतिक स्थायित्व छ न विधिको शासन छ । अनि लगानीको वातावरण कहाँ पाउँछ ? सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ काम गर्ने वातावरण, लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । काम गर्ने संस्कृतिको विकास पनि हुनु आवश्यक छ । हामीले आफैमाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।
अब अर्को प्रसंगमा जाउँ । पार्टी स्थापनाको दुईवर्षमा पार्टीले सोचेअनुरुप सफलता हासिल गर्न किन सकेन ?
पार्टी स्थापनाको बेलामा केही मान्छेहरु वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा नबुझिकन नै आएका रहेछन् । केही मान्छेहरुले त बाबुरामलाई देउता नै ठाने, बाबुरामको पार्टीमा गएपछि छिट्टै सत्ता र शक्तिको स्वाद पाइन्छ भन्ने पनि सोचे । पुरानै सोच राखेर पनि केही आए । तिनले नाम नयाँ विधि पुरानै खोजे । राजनीतिमा जुन धैर्यता चाहिन्छ, त्यो उनीहरुमा भएन । नयाँ शक्तिले सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि मात्र राजनीति गरेको होइन । जो शक्तिका लागि मात्रै आए उनीहरु सोचेअनुसार शक्ति हात नपरेपछि गइहाले । त्यसकारण स्थापनाकालमा भएका केही सदस्यहरु अहिले छैनन् । आउन त केही अहिले नयाँ मानिसहरु पनि आएका छन् तर जनताले सोचेअनुसार पार्टी अगाडि बढ्न नसकेकै हो ।
नयाँ शक्ति कसरी अघि बढ्दैछ ?
हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिलेको विकृत राजनीतिलाई नै परिवर्तन गर्ने हो । नयाँ सन्दर्भमा नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व, नयाँ संगठनात्मक संरचनाको बनाउने र देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हाम्रो सोंच हो । जसलाई हामीले पाँच ‘स’को अवधारणाको रुपमा अगाडि सारेका पनि छौं । हामी अब त्यसका लागि संगठनलाई सुदृढ गर्न र यसै वर्ष महाधिवेशन गर्न लागिरहेका छौं । महाधिवेशनपछि हामी बाह्य र अरु पक्षलाई जोड दिन्छौं त्यसअघि चाहिँ अरु पक्षलाई ध्यान दिँदै आन्तरिकरुपमा पार्टीलाई बलियो बनाउन जोड दिन्छौं ।
सैद्धान्तिक रुपमा हामी ठीक छौं अब प्राक्टिकल्ली पनि जनताको घरदैलोमा जाँदैछौं । हामीले भर्खरै काठमाडौं महानगरपालिका लगायत काठमाडौंका सबै नगर प्रमुखहरुलाई सबै सार्वजनिक सूचना माग गर्दै पत्र दिएका छौं । सरकारले गर्ने हरेक राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको खबरदारी गर्छौं हामी । सबै तहका सरकारलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन हामी योजनावद्ध कार्यक्रम बनाउँदैछौं । त्यसैले हामी जनतामाझ हाम्रो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनुको साथै हाम्रो विचारहरु जनतामाझ लैजाँदैछौं ।
नयाँ शक्तिले आफ्नो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
नयाँ शक्तिले पहिला आफूलाई नयाँ बनाउनुपर्छ । आफू कहाँ कतातिर परे भनेर चिन्ता नलिने गर्नुपर्छ । जसले जहाँको नेतृत्व लिएको छ, त्यसै क्षेत्रको मात्र चिन्ता लिने, त्यस क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्ने, समस्या पहिल्याउने हुनुपर्छ । हामी अहिले ‘स्याडो गभरमेन्ट’ बने मात्र पुग्छ । ठाउँठाउँमा हामीले प्रयास गर्दैछौं । हाम्रो योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सदस्यहरुको पूर्वतयारी नै आवश्यक छ ।
आगामी निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले सरकारले नेतृत्व लिने सम्भावना कत्तिको छ ?
नयाँ शक्तिले अहिलेदेखि सत्ता भनेर सोचेको छैन । सत्तालाई वाइप्रोडक्टको रुपमा बुझेको छ । अहिले नयाँ शक्ति नयाँ संरचना, नयाँ विचार सहित नयाँ बन्ने अभियानमा लागेको छ । नयाँ शक्तिले आफ्नो विचार र दीर्घकालीन लक्ष्य जनतामाझ बुझाउन सक्यो भने सत्ता स्वत: आउँछ । त्यसकारण आगामी चुनावबाट मुलुकको नेतृत्व लिने सम्भावना धेरै छ ।
वर्तमान सरकारलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । तीन तहको सरकार छ । तीनवटै सरकारमा कुनै लगनशिलता छैन । हिजोकै घिसेपिटे तरिकाले खान खोज्दैछन् । त्यसकारण वर्तमान सरकारदेखि सबै जनता निराश छन् । अहिलेको सरकारले समृद्धि र समाजवादको कुरा गरे पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।